Botswana: Ebe ịga njem maka safari
Home » Na-agbasa News Travel » Botswana: Ebe ịga njem maka safari
Mara Tupu Go Gaa
Mgbe ị na-atụle ezumike safari na Botswana, otu n'ime ajụjụ mbụ a jụrụ, “Ọ Dị Ndo?” Travel.state.gov na-adụ ndị ọbịa ọdụ ka ha kpachapụ anya “nke ọma” mgbe ha na-eme njem na Botswana. Ihe nke a pụtara bụ na obodo nwere mpụ, dịka mba ndị ọzọ si eme; agbanyeghị, ndị njem na-elegharakarị ebe ha bi anya ma bụrụ ndị a na-achụso. Ọ bụ ezi echiche ịmụrụ anya banyere ihe bara oke uru gị na onwe gị, ebe ọ bụla ị nọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nleta na-agafe Botswana dị ka akụkụ nke otu ndị njem nleta (ndị a tụrụ aro nke ukwuu), ndị ọzọ na-achọ nnwere onwe nke njem onwe ha. Ọ bụrụ na nke a bụ mmasị gị ma ịchọrọ ị gafere obodo ahụ, ọ dị mkpa iburu n'uche na Botswana bụ otu n'ime mba iri na atọ na-agba aka ekpe n'Africa na ọnọdụ okporo ụzọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Zọ nnukwu okporo ụzọ (ugboro abụọ 2) na-enye ọnọdụ ịkwọ ụgbọala a nabatara; otu o sila dị, ubu maka ịdọpụta ihe mberede nwere ike ọgaghị adị na ụgbọ ala nwere nkwarụ na gwongworo na-adịkarị “arapara” n’etiti ụzọ. Immụ anụmanụ, ahịhịa, oke mmiri ozuzo, ọkụ na-adịghị mma, ọkụ ọkụ anaghị arụ ọrụ na ọkụ n'okporo ụzọ, nwere ike ịkpata enweghị ọhụụ ma zoo ihe egwu dị n'okporo ụzọ.
Gụọ isiokwu zuru ezu na mmanya. njem.
Ndị njem na-abata na-enweta ego na-eme njem nlegharị anya, ijeri USD3.3billion na-eme atụmatụ site na njedebe afọ
Nke ochie na kwa nke kacha nke McDonalds: A naghị anabata Dollar US